५३ लागेका राजेश हमाललाई ६ प्रश्न « Ramailo छ
५३ लागेका राजेश हमाललाई ६ प्रश्न
अब कस्तो फिल्म खेल्ने ?
प्रकाशित मिति : Jun 9, 2017
महानायक राजेश हमाल ५३ बर्षमा लागेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रका सर्वाधिक सफल अभिनेतालाई रमाइलो छ डटकम परिवार जन्मदिनको शुभकामना र दिर्घायुको कामना गर्दछ । फिल्म युगदेखि युगसम्मबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेका महानायकले दुई सय बढी फिल्महरुमा अभिनय गरेका छन् । बिहे कहिले गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रेमिका मधु भट्टराईसँग बिवाह गरेर दिएका महानायक माथि अझै केही जिज्ञासाहरु यथावत् छन् ? जुन प्रश्नहरुलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं :
१.पिता कहिले बन्ने ?
प्रेमिका मधु भट्टराईसँग चार वर्ष पहिले विवाह गरेका महानायक हमाल दम्पतीलाई सन्तान सुख मिलेको छैन । पिता कहिले बन्ने ? भन्ने जिज्ञासामा उनले तयारी हुँदै गरेको बताउँदै आइरहेका छन् । यदि तयारी नै भैरहेको हो भने तयारी कहिले पुरा हुन्छ त ‘राजेश दाई’ ?
२.फिल्म निर्देशन नगर्ने ?
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लामो समय राज गर्दा पनि फिल्म निर्माण र निर्देशनमा हात नहाल्ने सम्भवतः महानायक हमाल मात्रै एक्ला कलाकार होलान् । कथा खोज्दै गरेका महानायकले फिल्म निर्देशन कहिले गर्लान् ? पिता कहिले बन्ने जिज्ञासापछि यो प्रश्न दोश्रो चर्चामा रहि आएको प्रश्न हो । यदि महानायकले फिल्म बनाए या निर्देशन गरे भने उन्लाई मात्रै होइन, कलाकार देखि प्राविधिकदेखि सम्मलाई फाइदा पुग्नेछ । राम्रो फिल्म बनाए त दर्शकले फिल्म हेर्नेछन् ।
३.राजनीति नगर्ने ?
राजनीतिक रुपमा महानायक हमाल केही रिजर्भ देखिएका छन् । स्थानिय निर्वाचनमा एमालेका उम्मेरद्वारलाई जिताउन लागि परेपनि महनायकले आफु यही पार्टीको हो भनेर घोषणा गरेका छैनन् । के महानायकले राजनीति गर्दैनन् । गरे भने कहिले र कुन पार्टीमा आवद्ध भएर गर्लान् ?
४.बिंडो कसले थाम्छ ?
सदाबहार अभिनेता भुवन केसीका पुत्र नायक अनमोल केसी वर्तमान युवा पुस्ताका ढुकढुकी हुन् । अनमोलले आफ्नो पिताको बिंडा राम्रोसँग थामिरहेका छन् । यस मामलामा महानायक हमाल पछाडि छन् । नेपाली फिल्ममा मात्रै होइन राजेश हमालको वंशजमा पनि बिंडो कसले थाम्छ ? भन्ने चर्चा फिल्म नगरीमा छ । नेपाली फिल्ममा भन्दा पनि वंशज चलाउन महानायकलाई सन्तानको आवश्यकता देखिन्छ ।
५.अब कस्तो फिल्म खेल्ने ?
हलमा राजेश हमाललाई हेर्न दर्शकको लाइन नलागेको धेरै बर्ष भैसकेको छ । पछिल्लो केही बर्ष यता महानायक अभिनित फिल्महरु व्यापारिक रुपमा सफल छैनन् । बाग्मती, सकुन्तला जस्ता फिल्महरु असफल भए । के राजेश हमालको युग सकिएकै हो ? नयाँ पुस्तालाई राजेश हमालको फिल्म कसरी हेर्ने गराउने ? यस विषयमा सोच्न ढिला भैसकेको त छैन ?
६. समाज सेवामा कहिले लाग्ने ?
हाँस्य कलाकारको जोडी धुमुर्स सुन्तलीले भूकम्प पछि तीन वटा बस्ती मात्रै बनाएनन् । उनीहरुले आफ्नो छवि पनि समाज सेवीको रुपमा स्थापित गरे । भूकम्प गएपछि थुप्रै फिल्मकर्मी देशको सेवामा लागि परे । तर महानायक हमाल यसबाट विमुख देखिए भन्ने गुनासो गरे । धेरैले आरोप लगाए, देशमा यत्रो आपत पर्दा महानायक किन मौन रहे ? यो आरोपलाई पखाल्दै प्रत्यक्ष रुपमा समाज सेवामा कहिले लाग्ने ?